Ciidanka Somaliland oo xirtay darajo - BBC Somali - Warar
Ciidanka Somaliland oo xirtay darajo
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 2 Febraayo, 2013, 18:23 GMT 21:23 SGA
Maanta ayaa markii ugu horreysay Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud ku dhawaaqay in ciidamadu xirtaan derajadooda.
Maanta oo kale 2- dii bishii Febraayo1994, waxay ku beegantahay sanad guuradii 19-aad ee markii uu madaxweynihii hore ee Somaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, ku dhawaaqay aasaaska ciidan milleteri oo Somaliland yeelato kadib markii la mideeyay maleeshiyaadkii.
Darajada ciidanka Soomaaliland oo markii ugu horaysay ay xirteen.
Ilaa iyo xilligaasi ciidamada Somaliland ee milletiriga, boliiska, iyo asluubtu midkoodna ma xiran jirin darajooyinka ciidamada lagu yaqaanno.
inkastoo la kala yaqaanno saraakiisha iyo askarta.
Maanta, ayaa markii ugu horreysay Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, ku dhawaaqay oo ansixiyay in ciidamadu xidhaan derajadooda, isagoo sheegay in saraakiil, saraakiil xigeen ka badan shan kun haatan loo diyaariyay derajadoodii inay xidhaan iyo gunooyinkoodii oo miisaaniyadda sanadkan 2013 ugu jira.
Madaxweynaha Somaliland oo bixinaya darajada ciidamada ay xirtaan.